Ukuphepha - iSearch
Izwe ligcwele izithako ... nezingozi. Ikakhulukazi lapho abantwana beqala ukuhlola izwe labo. Ngezinye izikhathi zishesha kakhulu kangangokuthi abazali abakwazi ukuzilandela. Lokhu kuthakazelisa ngokukhethekile eminyakeni yobudala, lapho izingane zivele zihamba ngokuzumayo kangangokuthi zenza indlu yonke ingaphephile. Ngenkathi omunye engakapheli umzuzu omfushane, ngokuvamile uvame ukubonwa: I-loud loud ne-clanking iphazamisa i-vase phansi. Ukuhlushwa okuncane kuzokukwenza ubheke kahle futhi ubeke i-vase elandelayo endaweni ephephile. Kodwa zikhona izimo ezinonya kakhulu ongafuni ukuzicabangela ngemininingwane. Ngakho-ke, abazali bayelulekwa kahle ukuba basebenzise ngokushesha ngangokunokwenzeka nendaba yokuphepha endlini.
Ngakho-ke, akukho lutho olubi ngokuthatha izinyathelo zokuqapha ingane ngesikhathi sokukhulelwa. Ngisho nokusungulwa kwe-nursery, isibonelo, ukuvikelwa kokuqala kwesikhwama kungahlanganiswa. Ukufakwa kwesikhokho kukhona ngezigaba ezahlukene zamanani nemiklamo. Okusabalala kakhulu yibo ababoshiwe ekhoneni futhi futhi banamathisele umgqomo wokunamathisela emuva. Bavala isokhethi ngendlela yokuguqula, okungenjalo umthetho ongakwazi ukunqotshwa ngezandla zezingane ezincane. Ngezikhombo ezingavamile noma ezingalokothi zisetshenziswe, izitifiketi zetekisi zifanelekile ezifakwe engxenyeni futhi zingasuswa kuphela ngokusiza ipulaki noma ukhiye. Ukuhlala isikhathi eside, okungaqondakali futhi okuncane kakhulu ekufakeni nasekufakeni imishini yamandla kagesi nsuku zonke, noma kunjalo, kukhona amasokhethi aphakanyisiwe. Lapha, ukuvikelwa kwengane kuhlanganiswe ngqo ezindlini ezisekelweni. Njengoba izindlu kufanele zisuswe ngokuphelele ngenxa yokuguqulwa, sebenzisa isikhwama kufanele kwenziwe kuphela ngososayensi. Lokhu kuyisimo esithile sokuhlukunyezwa futhi kulungele ukwakhiwa okusha noma uma ukulungiswa sekuvele kuqhubeka.
Uma wonke amakamelo ayethuka, abazali kufanele bahlole ikhaya labo eminye imithombo yengozi. Ukuvimbela izitebhisi eziwela phansi, kunconywa ukuthi uvikele izitebhisi nge-grilles ekhethekile. Izigxobo zemizi zingacindezelwa ezinyathelo noma eziqinile futhi zivulwe kuphela ngombambo ophephile wengane. Ziqukethe iphaneli yepulasitiki eguquguqukayo noma imigoqo eyenziwe ngamapulangwe noma ensimbi futhi ingahle iguquke ngokuvumelana nendawo yobubanzi bezitebhisi noma inwetshwe ngamacacac ububanzi obufanele.
Ngisho namatafula ekhofi angaba yingozi ezinganeni. Ngokufanayo, lapho izingane ziqala ukuzidonsa noma zenze imizamo yokuqala yamahhala. Amaphethelo akho etafuleni kufanele ahlinzekwe ngabavikeli abaphephile bepulasitiki abavimbekile ukuvimbela ukulimala okungathí sina kwinhloko yezingane ezibucayi uma kwenzeka ukuwa. Kodwa kunemikhiqizo eminye eminingi ukusiza ukwenza ikhaya liphephe izingane. Amadivayisi wezokuphepha amathrekhi ahlukene ngezihumusho ezahlukene noma izitofu zitofu zifakiwe. Kunoma yikuphi, amakhabhinethi namashalofu kufanele afakwe ezindongeni ukuvimbela ukuba bangangeni lapho bekhuphuka noma bedonsa ingane.
Kodwa hhayi kuphela izikhala zokuphepha ezingavikeleki kungaba yingozi engabantwana. Yiqiniso, lokhu kusebenza nakwezinye izici zokuphila. Ukuvikelwa kwengane, ikakhulukazi ezokuthutha, kuyindaba okwamanje. Nakuba isidingo sokuphoqeleka kwezingane esifundweni saseJalimane saqala ukuqala i-1993, manje asikwenzeki ukuthutha ingane engaphephile emotweni. Okufanayo kusebenza nasezihlalo zamabhayisikili nama helmetshi. Ukuzibophezela kwabo kungene emzimbeni nasegazini wonke umuntu, ukulahla okungacabangi. Izindinganiso eziqinile zokuphepha ziqinisekisa ukuthi izingane zihlomele kahle ngayinye uma kwenzeka ukushayisana namuhla. Kodwa-ke kukhona nokuhlukana okumbalwa kwinani elikhulu lamamodeli okufanele avikele izingane emgwaqweni. Lokhu akukhathaleli ukuphepha, kodwa futhi ukunethezeka nokufaneleka kwansuku zonke. Umqondisi wethu uletha izinzuzo nezinkinga zokukhanya.